Inkampani yethu - Shineon Technology Co., Ltd.
IShineon Technology Co., Ltd.
I-ShineOn iyiphakethe elihola phambili le-LED lomhlaba jikelele nomhlinzeki wesixazululo semodyuli yokukhanyisa nemakethe yokubonisa. Yasungulwa ngoJanuwari 2010. Yasungulwa yiqembu lochwepheshe bezimboni ze-optoelectronics abanolwazi ezinkampanini zobuchwepheshe zase-US. I-ShineOn ixhaswe ngokuqinile yizimboni ezinkulu zase-USA nezamaShayina, okubandakanya ukuqhutshwa kwe-GSR, iNorthern Light Venture Capital, i-IDG-Accel Partners neMayfield, futhi kusekelwa nohulumeni kamasipala waseBeijing.
I-ShineOn ithuthukisa amaphakethe we-LED ahamba phambili emhlabeni kanye namamojula wokusebenza okuphezulu, ukukhanya kwemibala ebanzi ye-gamut TV kanye nomthombo wokukhanya ophakeme, othembekile. Kungama-SMD, i-COB, amaphakheji we-CSP nemodyuli ehlanganisiwe yomshayeli we-DOB asetshenziswe ngamakhasimende amaningi wekhwalithi ephezulu we-TV namakhasimende ejwayelekile wokukhanyisa.
IShineOn ithole isitifiketi ku-CNAS ne-EPA ngelebhu yayo ye-LM-80. Isebenze uhlelo oluthuthukile lwe-MES ne-ERP kulayini wayo wokukhiqiza futhi yasungula uhlelo oluqinile lokuphathwa kwekhwalithi. Umbono wenkampani ukuhlinzeka amakhasimende ngezixazululo zokuncintisana nemikhiqizo ethembeke kakhulu, nokungeza inani kumakhasimende ayo.
I-ShineOn yamukelwa njengenkampani eyi-Global Global-tech 100 ka-2011, futhi yazuza umklomelo we-2013 Red Hering Global 100. Iphinde yaqanjwa njenge-2014 Deloitte Top 50 Fast Growing High Tech Inkampani eChina.
Ngemuva kweminyaka yentuthuko esheshayo, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zemakethe ezikhulayo zamadivayisi namamojula aphezulu we-optoelectronic, "iShineon (Nanchang) Technology Co, Ltd." yasungulwa ngo-Okthoba 2017 eNanchang. Sithatha ithuba i-R & D yaseBeijing kanye nokwenziwa kwamazwe omhlaba, kuhlanganiswe nezinzuzo zeNanchang zesifunda nezimboni, kusheshisa ukunwetshwa kwesikali sokukhiqiza samadivayisi asezingeni eliphakeme we-optoelectronic kanye nezingxenye zemodyuli, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezifuywayo nezangaphandle zemikhiqizo esezingeni eliphakeme ye-ShineOn.
I-Shineon - umkhiqizo owaziwa umhlaba wonke wamaphakheji we-LED nabakhiqizi bamamojula.
Yenza noma yikuphi ukwenza ngokwezifiso kwemfuneko yakho.
Iminyaka eyi-10 iqhubeka ngokuthuthuka yesipiliyoni embonini ye-LED namamojula wemboni.